Wasiirka Leo "Turkey keeno xarunta duulimaadyada aduunka ee" | RayHaber | raillynews
HometareenkaWasiirka Leo "Turkey keeno xarunta duulimaadyada aduunka ee"
Wasiirka Leo "Turkey keeno xarunta duulimaadyada aduunka ee"
05 / 08 / 2017 tareenka, GUUD, TURKEY
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta, ayaa yiri, "Marka aan diyaarinno diyaaradda wadada dadweynaha, ma duuli Turkey `buuxiya nagula Ballantamay, isagoo leh sidoo kale in aanu noqon maranka duulimaadka ee adduunka ee." Waxa uu sheegay.
Arslan ayaa Muş u soo jiiday munaasabaddii furfurnaanta iyo booqashooyin kala duwan oo ku aaddan dhismaha gegida dayuuradaha iyo dhismaha dhoobada.
Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay Mas'uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir kuwaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaaladda Muqdisho.
Isagoo cadeynaya in Muş sidoo kale ka faa'iideysatay dhaqdhaqaaqa horumarinta, Arslan ayaa sheegay, in aanu meelo badan ka bilaabi doonno shaqooyin badan. Ma qaadi karno gogol-xaaraynta, furitaanka. Waagii hore, dadku ma heli kari waayeen shaqada aasaaska aasaasiga ah, waxay yiraahdeen, kaliya dhagxaan dhagax ku dhexjiraan, oo saldhig u ah aasaaska. Taas bedelkeeda, ma sii socon karno dhabta dhabta ah. Garoonka diyaaradaha ee Mustu wuxuu yeelan doonaa dhisme terminal oo aad u fiican. "
"Tirada garoomada diyaaradaha ayaa ka kordhay 26 ilaa 55"
Wasiirka Arslan, sano 15 ee Turkey "airline, dadku waxay ahaan doonaan sida ay u" kordhiyo tirada garoomada diyaaradaha kaas oo 26 daboolay 55 abaabulka sannadkii, wuxuu tilmaamay in ay soo galeen waddankii adeegaya 35 milyan oo rakaab ka 180 milyan oo rakaab ah.
Waxay ku adkeysanayaan in ay noqon doonaan xarun ka mid ah gaadiidka hawada laga soo qaado Maraykanka ilaa Bariga Dhexe iyo laga bilaabo Waqooyiga Yurub ilaa Afrika, Arslan ayaa carrabka ku adkeeyay in ay xaq u siin doonaan tan:
"Airline jidka dadka sidii aynu, in aan duuli doonaa diyaaradaha isagoo leh 'kanu waa ballankii our aan ka sameynay fulinta Turkey waa maranka duulimaadka ee adduunka ee. Taas awgeed, waxaanu noqonay madaarka ugu wayn adduunka adoo ka baxsanaya wadan ka dhigaya madaaradaha badda, taas oo aan ka dheeraynin garoomada diyaaradaha ee dhexdhexaadka ah iyo kuwo waaweyn. Marka aan dhisno garoonka weyn ee adduunka, waxaan ognahay in tani ay u adeegi doonto dadka waddankeena. Intaa waxaa dheer, waxay awood u siinaysaa muwaadiniinta dal kasta oo adduunka ah in ay ka guuraan qaaradda qaarad qaaradda kale waxayna siin doonaan qiime dheeraad ah dhaqaalaha waddankeena. Mujlular iyo dadka kale ee gobollada kale ayaa ka faa'iideysan doona tan. "
"Qiimaha Maalgashiga Mujaahida 1 Million 584 Milyan Milyan"
Iyadoo ay sharraxayso mashaariicda mashruuca adduunka, Eurasia Tunnel, Osmangazi iyo Yavuz Sultan Selim Bridge ee Istanbul, Arslan ayaa sheegay inay ujeedadoodu tahay inay u adeegaan Muslimiinta iyo dadka kale oo leh qiimo dheeraad ah oo ka kooban goobahaas. ayaa soo jiidatay indhaha magaalada.
Arslan ayaa xusay duulimaadyada ka imaanaya Muş ilaa Istanbul, Ankara iyo Bursa, isaga oo hoosta ka xariiqay in ay ku dadaalayaan in ay u adeegaan dadka magaalada si aysan ugu qancin maalgelinta.
Arslan, Mesha airport iyo dhismaha terminaalka, iyo sidoo kale wasaaradda ayaa sheegay in ay saxiixeen adeegyo aad u muhiim ah, waxay bixiyeen macluumaadka soo socda:
"Qiimaha maalgashiga aan sameynay sida Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaadhsiintu waa keliya 1 bilyan 584 million pounds. Waxaan adeegsanay Muş wadooyinka, garoonka diyaaradaha iyo meelo kale, laakiin ma dhahayo 'ku filan'. Waxaan aamminsanahay in dadkayagu uqalmayaan wax badan oo aan kordhinno maalgalintaan. Waxaan leeyahay qaraabo aad u dhow Muş. Waan aqaanaa Muscov tan iyo markii aan caruur ahaa. Sida Wasaaraddu, waxaan leenahay masuuliyad dheeraad ah gobolka markaad u shaqeyneyso 81. Isagoo ka warhaynaya tan, waxaan u soconaynaa inaan aragno adeegyada maanta. Inkasta oo 2003 ee Muş ay leedahay waddooyinka 16 ee wadooyinka kala qaybsan, waxaan ku daray miino kale 112. Qalabka 112,5 hadda waa kuleyliyaha kulul marka uusan jirin asfalt kulul. Wadada weyn ee Mustafim 83 waxay ahayd asfalt kulul. 114 ayaa waddada u kala qaybsantay wadada isku xirta Mus-Bingol. Wadooyinka xNUMX ee jidadka ayaa la dhisay si loo gaadho ardayda jaamacadda ardaydeena si aad u raaxo leh. "
"Waxaan ka codsanay albaabka IMF"
Arslan wuxuu xusuusiyay inay fuliyeen mashruucyo muhiim ah oo ku yaal Muş, mashaariicda muhiimka ahna ay sii socdaan.
"Waxaan ka shaqeyneynaa mashruuca Palu-Genç-Muş Railway. 1,9 miisaaniyad lacag ah. Waxaan u baryayaa lacag ka albaabka IMF ayaa si aad u hesho 300 million loo isticmaalo, iyo waxaan soo dhaweynaynaa wakiilada si ay u zurnayla fuusto marka ay yimaadaan dalka Turkiga. Wasiirro, ra'iisal wasaarayaal ayaa hor istaagay cirridka gacanta, si ay noogu dhiibaan 100 Milyan Dollar. Maalmahaas, waxaanu noqday waddan halkaas oo 1,9 Milyan oo Pound lagu isticmaalay hal mashruuc oo ku yaal Muş. Dabcan, Madaxweynaha Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha. Ilaahay ha ka raalli noqdee kuwa asxaab ka dhigaya shalay ilaa maanta. 15 Waxaad ka dhex taagan tahay madaxdeena iyo asxaabteeda oo leh taageero aad u wayn sanado. Adiga ayaa ka danbeeya mustaqbalka carruurta aad caruur leedahay, carruurtaada. Waxaan kuugu adeegaynaa wax badan oo ku saabsan arrintan. "
Ac Waxaanu tirtiri doonaa farqiga u dhexeeya horumarinta gobollada "
Arslan ayaa sheegay in ay horumar weyn ku sameeyeen xiriirka Muş iyo kordhinta tirada xariijinta fiber-ka iyo saldhigyada saldhigga waxaana uu sheegay in 2002 aysan lahayn internet-ka internetka ee 197 maanta.
Ahmet Arslan, muwaadiniinta ka soo jeeda kharashka dalka iyo mustaqbalka 15 sida shahiiday kharashka xukuumadda ayaa sii wadi doona inay u adeegaan dowlad ahaan, adeegyadu waxay kordhin doonaan heerarka nolosha dadka iyada oo la fulinayo dhaqaalaheeda, dhaqaalaha gobolka, ayaa carabka ku adkeeyay in ay raadin doonaan siyaabo lagu abuurayo warshadaha.
Arslan wuxuu xusuusiyay in ay bilaabeen Barnaamijka Xarumaha Xariirka ee gobolka 23, oo ay ku jiraan Muş, si loo tirtiro farqiga u dhexeeya horumarinta gobollada waxayna isticmaaleen bayaankan soo socda:
Daraasadaha digniinta ee arrintan ayaa gaadhay marxaladdii ugu dambaysay. Maalmo yar ayaan soo saari doonaa qoraal. "Horumarinta, ka-tegista qaddarka gobolladani ma noqon karaan kuwa cadowga ah" ayaa yiri Recep Tayyip Erdogan sannadkii 15, sida gobolka ayaa horumarin doona. Taas awgeed, waanu tirtiri doonaa farqiga u dhexeeya horumarinta gobollada. Muşlu waxay rabtaa in ay u duulaan İzmir, waxaan la hadli doonaa shirkadaheena. Haddii ay jiraan rakaab ku filan, madax madax u noqo. 2 sano ka hor ma jirin wax diyaarad u ahaa Bursa. Hadda waxaa jira safaro. Hadafkayagu waa inaanu samaysanno terminal, ku habooneyn, ka dibna shirkadaha dayuuradaha ku dhajiya diyaaradaha dheeraadka ah iyagoo leh 'yimaadaan oo arag'. "
Wasaaradda Gaadiidka Arslan 3. Oo ku dhawaaqay furitaanka Bridge (Video)
Wasaaradda Gaadiidka ayaa booqatay bogga dhismaha ee Avon Avrasol
Wasiirka Gaadiidka Arslan wuxuu u socdaalaa Marmaray
Wasiirka Gaadiidka Ahmet Arslan, Fikrada Channel II
Wasiirka Gaadiidka Carbeed wuxuu ku biiray Dimuqraadiyada iyo Shuhadada Soomaliya ee Izmir
Wasiirka Gaadiidka Ahmet Arslan Samsun ma sheegin inay jirto tareen sooman, laakiin ...
Wasaaradda Gaadiidka Arslan İzmir
Wasaaradda Gaadiidka Arslan Farriinta Sanadka Cusub
Wasaaradda Gaadiidka Carabta, waxay u mahadcelineysaa Ummadeena
Wasiirka Gaadiidka Arslan, Turkey 10. Dhaqaalaha weyn ayaa noqon doona
Wasaaradda Gaadiidka Carabta waxay booqatay Tülomsaş
Wasiirkii UDH Ahmet Arslan oo jooga Tareenka Xawaaraha Sare
Wasiirka Arimaha Dibadda ayaa la kulmay Masquita, Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaarsiinta Mozambique
Farriinta Wasiirka Gaadiidka Arslan Ramadan
Wasiirka arimaha dibadda: TCDD, jidadka iyo shaqaalaha PTT oo la xiro
Maanta taariikhda: 5 August 1935 Fevzi Paşa-Diyarbakir Line ...
TCDD waxay gubatay Green Light si Denizli